UMargaret Beaufort: Ukwenziwa kweTudor Dynasty
Umama kunye noMncedisi kaHenry VII
UMargaret Beaufort Biography:
Kwakhona ubone: iinjongo ezisisiseko kunye nexesha elimalunga noMargaret Beaufort
YoMntwana waseMargaret Beaufort
UMargaret Beaufort wazalwa ngo-1443, ngaloo nyaka uHenry VI waba ngukumkani waseNgilandi. Uyise, uJohn Beaufort, wayengunyana wesibini kaJohn Beaufort, owokuqala u- Earl waseSomerset, owayengunyana ongu-John of Gaunt ngunkosikazi wakhe, uKatherine Swynford . Wayebanjwe kwaye wabanjwa entolongweni yiFrentshi iminyaka engama-13, kwaye, nangona wenza umlawuli emva kokukhululwa kwakhe, wayengekho mhle kakhulu emsebenzini.
Watshata ne-heiress uMargaret Beauchamp ngo-1439, ngoko-ke ukususela ngo-1440 ukuya ku-1444 wayebandakanyeke kwiinkalo zokungaphumeleli kwempi kunye nokuphazamiseka apho wayehlala ephikisana noMbusi waseYork. Wayekwazi ukuzala intombi yakhe, uMargaret Beaufort, kwaye kuthiwa wayenabantwana ababini abangekho mthethweni, ngaphambi kokufa kwakhe ngo-1444, mhlawumbi ngokuzibulala, njengoko wayeza kuhlawuliswa.
Wayezama ukulungiselela izinto ukuze umfazi wakhe abe ngumgcini weentombi zabo, kodwa uKumkani uHenry VI wamnika njengeWadi kuWilliam de la Pole, uMbusi weSuffolk, ogunyaziwe lwakhe lwafuduka lwabahlali baseBeforforts kunye nokuhluleka kukaJohn.
UWilliam de la Pole watshata nomntwana wakhe kwiwadi, malunga nobudala obufanayo, uJohn de la Pole. Umtshato - isetyenti somtshato, esingaqhawulwa phambi kokuba umtshakazi abe ngu-12-inokwenzeka ukuba yenzeke ngo-1444. Umcimbi osesikweni ubonakala uyenziwa ngoFebruwari 1450, xa abantwana babeneminyaka eyisixhenxe nesibhozo ubudala, kodwa ngenxa yokuba bezalamane, ukupasa kukaPapa kwakufuneka kwakhona.
Oku kwafunyanwa ngo-Agasti ka-1450.
Nangona kunjalo, uHenry VI wadlulisela umgcini kaMargaret ku-Edmund Tudor noJasper Tudor, abazalwana bakhe abancinci abancinci. Unina, uCatherine waseValois , watshata no-Owen Tudor emva kokuba indoda yakhe yokuqala, uHenry V, yafa. UCatherine wayeyintombi kaCharles VI waseFransi.
UHenry kungenzeka ukuba wayecinga ukutshata nomntwana oseMargaret Beaufort kwintsapho yakhe. UMargaret kamva wachaza ukuba wayenombono apho uSt. Nicholas avume umtshato wakhe ku-Edmund Tudor esikhundleni sikaJohn de la Pole. Isivumelwano somtshato noYohane sachithwa ngo-1453.
Umtshato ku-Edmund Tudor
UMargaret Beaufort noEdmund Tudor batshata ngo-1455, mhlawumbi ngoMeyi. Wayeneminyaka elishumi elinesibini, kwaye wayeneminyaka engama-13 ubudala kunokuba wayekho. Baya kuhlala kwifa lika-Edmund eWales. Kwakuqhelekileyo ukulinda ukutshata umtshato, nangona ukuba unesivumelwano esincinane, kodwa uEdmmund akazange ahloniphe loo masiko. UMargaret wakhulelwa ngokukhawuleza emva komtshato. Emva kokuba ekhulelwe, u-Edmund wayenamalungelo amaninzi ubuncwane bakhe kufuneka afe.
Emva koko, ngokungalindelekanga kwaye ngokukhawuleza, uEdmund wagula ngesibetho, waza wafa ngoNovemba ka-1456 ngelixa uMargaret wayesezinyanga ezintandathu ezikhulelwe. Waya e-Pembroke Castle ukuze azenzele ukukhuselwa ngumgcini wakhe wangaphambili, uJasper Tudor.
Henry Tudor Ozelweyo
UMargaret Beaufort wazala ngoJanuwari 28, 1457, kwintsana egulayo neyincinane eyayiyiqamba ngokuthi nguHenry, mhlawumbi ibizwa ngokuba ngumalumekazi wakhe u-Henry VI. Umntwana wayeza kuba ngukumkani omnye, njengoHenry VII - kodwa kwakukude kwixesha elizayo kwaye akukho nto ayicinga ngayo ekuzalweni kwakhe.
Ukukhulelwa kunye nokubeletha ngexesha elimncinci kwakunobungozi, ngoko ke isiko esiqhelekileyo sokulibazisa ukugqitywa komtshato. UMargaret akazange alale omnye umntwana.
UMargaret wanikezela kunye nemigudu yakhe, ukususela ngaloo mini, kuqala ukuya kusinda kwintsana yakhe yokugula, kwaye kamva ekuphumeleleni kwakhe ekufuneni isithsaba saseNgilani.
Njengomhlolokazi omncinane kunye nobutyebi, intlekele kaMargaret Beaufort yayikudala ukutshata kwakhona - nangona kunokwenzeka ukuba wayedlala inxalenye kwizicwangciso. Umfazi oyedwa, okanye umama ongenamntwana, kulindeleke ukuba afune ukukhuselwa komyeni. NgoJasper, wahamba esuka eWales ukulungiselela ukukhuselwa.
Wayifumana kwinyana encinane kaHumphrey Stafford, umbusi waseBuckingham. UHumphrey wayeyinzala kaEdward III waseNgilani (ngoonyana bakhe, uTomas of Woodstock).
(Umfazi wakhe, u-Anne Neville, naye wavela ku-Edward III, ngunyana wakhe uJohn of Gaunt nentombi yakhe, uJoan Beaufort - uninakazi kaMargaret Beaufort owayengumama kaCecily Neville , unina ka-Edward IV noRichard III . ) Ngoko ke babefuna umcimbi wepapa wokutshata.
UMargaret Beaufort noHenry Stafford babonakala bephumelele. Ingxelo ehleliyo ibonakala ibonisa uthando oluyimfuneko phakathi kwabo.
Nangona enxulumene nabaphathi beYork abaqhelekileyo kwiimfazwe ezilandelelana ngoku ezibizwa ngokuba yiiMfazwe zeRos , uMargaret naye wayehlobene kakhulu kunye nokuhambelana neqela laseLancastrian. UHenry VI wayengumntakwabo ngomtshato wakhe noEdmund Tudor. Unyana wakhe unokuthathwa njengendlalifa kuHenry VI, emva koonyana bakaHenry u-Edward, iNkosana yaseWales.
Xa uEdron VI, intloko yeYork emva kokufa kukayise, wanqoba abaxhasi bakaHenry VI emfazweni, wathabatha isithsaba kuHenry, uMargaret kunye nendodana yakhe baba yi-pawn.
U-Edward wahlela ukuba umntwana kaMargaret, u-Henry Tudor omncinci, abe yilungu lomnye wabancedisi bakhe abakhulu, uWilliam Lord Herbert, naye waba ngu-Earl wePembroke, ngoFebruwari, ngo-1462, ehlawula abazali bakaHenry ngelungelo. UHenry wayeneminyaka emihlanu ubudala xa wahlukana nomama ukuba ahlale nomlindi wakhe omtsha.
U Edward naye watshata noHenry Stafford oyindlalifa, omnye uHenry Stafford, kuCatherine Woodville, udade ka-Edward u- Elizabeth Woodville , udibanisa iintsapho kunye kunye.
U-Margaret no-Stafford bamkela ilungiselelo, ngaphandle kokubhikisha, kwaye ngoko banako ukuhlala benxibelelana no-Henry Tudor oselula. Abazange bavukele ngokuphangaleleyo kunye nokuphikisa obala ukumkani omtsha, baze bamkela ukumkani ngowe-1468. Ngo-1470, u-Stafford wajoyina inkosi ekuhlaseleni ubuvukelo obubandakanya ubudlelwane obuninzi bobuhlobo bukaMargaret (ngomtshato wokuqala womama).
Amandla Amatshintsho Amandla
Xa uHenry VI ebuyiselwe amandla ngo-1470, uMargaret wakwazi ukutyelela ngokukhululekile kunye nendodana yakhe kwakhona. Wayenomntu okhethekileyo kunye nokubuyiswa kukaHenry VI, ukutya kunye noHenry Henry kunye nentsha kaHenry Tudor kunye nomalume wakhe, uJasper Tudor, ngokucacileyo ukusebenzisana kwakhe neLancaster. Xa uEdd IV IV ebuya kumandla kunyaka ozayo, oku kwakuyingozi.
UHenry Stafford uqinisekiswe ukuba angene ehlangothini leYorkist ekulweni, ekuncedeni ukunqoba i- Battle of Barnet kwiqela laseYork. Unyana kaHenry VI, uPrince Edward, wafa ekulweni okwabangela ukunqoba ku-Edward IV, iMfazwe yaseTewkesbury , kwaye emva koko uHenry VI wabulawa kungekudala emva kwemfazwe. Oku kwashiya umfana uHenry Tudor, oneminyaka eli-14 okanye eyi-15 ubudala, oyindlalifa yecala lokumangalelwa kwe-Lancastrian, ukumbeka engozini enkulu.
UMargaret Beaufort wacebisa unyana wakhe uHenry ukuba abalekele eFransi ngoSeptemba ngo-1471. UJasper wahlela ukuba uHenry Tudor ahambe eFransi, kodwa umkhombe kaHenry wabuhlungu. Wagcina esabela kwiBrittany. Apho, wahlala eminye iminyaka engama-12 ngaphambi kokuba yena nonina badibana kwakhona.
UHenry Stafford wasweleka ngo-Oktobha ngo-1471, mhlawumbi ngamanxeba aphuma empini e-Barnet, eyabangela impilo yakhe embi - wayesebenzeka ixesha elide ngenxa yesikhumba.
UMargaret walahlekelwa ngumkhuseli onamandla - kunye nomhlobo kunye nomlingane othandekayo - ngokufa kwakhe. Ngokukhawuleza uMargaret wathatha amanyathelo omthetho ukuqinisekisa ukuba iziqhamo zakhe ezizuzwe nguyise ziza kuba yindodana yakhe xa ebuyela eNgilani kwixesha elizayo, ngokuzibeka kwi-trust.
Ukukhusela umdla kaHenry Tudor phantsi kolawulo luka-Edward IV
NjengoHenry eBrittany, uMargaret wanyuka waya kumkhusela ngokutshata noTomas Stanley, lowo u-Edward IV wammisela ukuba abe ngumphathi wakhe. U-Stanley wathola, ngenjenjalo, umvuzo omkhulu kwiiindawo zikaMargaret; Kwakhona wamnika nemali engenayo evela kumazwe akhe. UMargaret ubonakala esondele kufuphi no-Elizabeth Woodville, ukumkanikazi ka-Edward, kunye neentombi zakhe, ngeli xesha.
Ngo-1482, unina kaMargaret wafa. U-Edward IV wavuma ukuqinisekisile isihloko sikaHenry Tudor emazweni uMargaret abekwe ekuthembekeni kwiminyaka elishumi ngaphambili, kunye nakwamalungelo kaHenry wokufumana isabelo semali evela kunina-malinina-kodwa kuphela xa ebuyela eNgilani.
Ngo-1483, u-Edward wabulawa ngokukhawuleza, kwaye umzalwana wakhe wathatha itrone njengoRichard III, echaza umtshato ka-Edward u-Elizabeth Woodville engavumelekanga kunye nabantwana babo abangekho mthethweni . Wavalela oonyana ababili baka-Edward e-Tower yaseLondon.
Abanye ababhali-mlando bakholelwa ukuba uMargaret wayenxalenye yecebo elingazange liphumelele ukuhlangula iinkosana emva nje kokuvalelwa kwabo.
UMargaret ubonakala ebenzela uRichard III, mhlawumbi ukutshata noHenry Tudor kwisihlobo esisebukhosini. Mhlawumbi ngenxa yokusola okukuthi uRichard II wabulala abazalwana bakhe eNkundleni - abazange babonwe kwakhona emva kokubambalwa kokuqala emva kokuvalelwa kwabo - uMargaret wajoyina iqela lokuvukela uRichard.
UMargaret wayenxibelelana no-Elizabeth Woodville, kwaye wayilungiselela umtshato kaHenry Tudor kwintombi endala ku-Elizabeth Woodville no-Edward IV, u- Elizabeth waseYork . UWoldville, owaphathwa kakubi nguRichard III, kuquka ukulahlekelwa ngamalungelo akhe onke okuba ngumlambo xa umtshato wakhe ubhengezwa ukuba awuvumelekanga, waxhasa icebo lokubeka uHenry Tudor etroneni kunye nentombi yakhe uElizabethe.
UMargaret Beaufort wayexakeke kakhulu ekuqeshweni ngenxa yokuvukela. Phakathi kwabo bazimisele ukujoyina u-Duche waseBuckingham, umntakwabo womyeni wakhe owayengumyeni kunye nendlalifa (naye ogama linguHenry Stafford) owayengumsekeli wokuqala wobukumkani bukaRichard III, kwaye ngubani owayenabo noRichard xa bebambelele kwindodana ka-Edward IV, U Edward V. Buckingham waqalisa ukukhuthaza imbono yokuba uHenry Tudor wayeza kuba ngukumkani kunye no-Elizabeth waseYork indlovukazi yakhe.
UHenry Tudor ulungiselele ukubuyela enkxaso yaseMngeni eNgilani ngasekupheleni kwe-1483, kunye neBuckingham ehlelelwe ukuxhasa ukuvukela. Imimoya embi yayithetha ukuba uhambo lukaHenry Tudor lwalulibazisekile, kwaye umkhosi kaRichard wabetha iBuckingham. UBuckingham wathinjwa waza wahlulwa intloko ngenxa yokunyaniseka ngoNovemba 2. Umhlolokazi wakhe watshata noJasper Tudor, umkhwe kaMargaret Beaufort.
Nangona ukuhluleka kwemvukelo, uHenry Tudor wathembisa ngoDisemba ukuba athathe isithsaba sikaRichard aze atshade no-Elizabeth waseYork.
Ngenxa yokungaphumeleli kwemvukelo, kunye nokuqhutyelwa komlingani wakhe uBuckingham, umtshato kaMargaret Beaufort uStanley wamsindisa. IPhalamende ekugqibeleni kukaRichard III ithatha ulawulo lwakhe kwipropati yakhe kwaye yanikela kumyeni wayo, kwaye ibuye iguqule onke amalungiselelo kunye nethemba elikhusele ilifa lonyana wakhe. UMargaret wafakwa eStleyley, kungekho nkonzo. Kodwa uStanley wagxininisa lo myalelo ngokukhawuleza, kwaye wakwazi ukuhlala enxibelelana nonyana wakhe.
UHenry waqhubeka nokulungelelanisa-mhlawumbi kunye noxhaswa oluqhubekayo lukaMargaret, nangona wayecinga ukuba yedwa. Ekugqibeleni, ngo-1485, uHenry wabuya ngomkhumbi, waya eWales. Wathumela ngoko nangoko unina xa efika.
Umyeni kaMargaret, iNkosi uStanley, ecaleni likaRichard III kwaye wajoyina noHenry Tudor, owamnceda ukutshintshisa iingxaki zokulwa noHenry. Inkokheli kaHenry Tudor yawanqoba abo baRichard III kwiMfazwe yaseBosworth, yaye uRichard III wabulawa ekulweni. UHenry wazibiza ngokuba ngukumkani ngokulwa; akazange azithembele kwibango elincinci lelifa lakhe leLancastrian.
UHenry Tudor wathinjwa njengoHenry VII ngo-Oktobha 30, ngo-1485, waza wachaza ukuba ubukumkani bakhe bubuyiselwe kwimini ngaphambi kweMfazwe yaseBosworth - ngaloo ndlela wamvumela ukuba ahlasele umntu olwa noRichard III, kunye nokubamba impahla kunye nezihloko zabo.
UMargaret Beaufort, uMama kaKumkani - ubomi obusele kunye neminikelo kaMargaret Beaufort
UMargaret Beaufort: Iinkcukacha ezisisiseko kunye nexesha elifanelekileyo
UMargaret Tudor, ogama linguMargaret Beaufort
Abalingiswa kwiNdlovukazi yaseMhlophe
IMfazwe yaseMexico naseMerika: uMongameli Jikelele uZachary Taylor
Quotes kaDiver von Furstenberg
Qukie Jackie Joyner-Kersee
Abhigail Adams Quotes
Imfazwe ka-1812: I-Commodore Oliver Hazard Perry
Iimodareyitha: iKhadikhadi, iFixed okanye i-Mutable
Ngaba i-Copper Bowls iyona nto ibhetele ngakumbi xa i-Egg Whites?
Inkcazo ye-Idiographic kunye neNomothetic
Isingeniso kwiNkcazo yezoLuntu
Tshintsha Ububuthakathaka Bakho Ootitshala kwiiNdawo zeMpahla kunye neNkundla yoTyhulo
Ukudibanisa nabantu abane-Black-Eyed People
Ufanele Ukholo Lwenu?
10 I-Shonen Manga I-Must-Reads
Ingaba kufuneka ukuba afune ukuzithoba?
IiMculo eziye zatshintsha ububanzi
Inkcazo yoLawulo lweNtlalo